MDC inoti chiri kupa kuti nyika iite seyakageza negoka munyayama inyaya yekutadza kutonga, kubirira saudzo, kutyora kodzero dzevanhu uye huori hunotyisa.
Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsawo mashoko padandemutande reTwitter uchiti zvirango handizvo zvauraya nyika asi kuti huori.
Semuenzaniso muzinda uyu wati pane mari yemangoda inosvika mamiriyoni gumi yakanyangarika, wapawo muenzaniso wekuti mari inosvika mamiriyoni mazana masere nemakumi mana yecomand Agriculture yakanyangarikawo. Ko nyanzvi dzinotiiwo nenyaya dzezvirango?
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nekudyidzana nedzimwe nyika, VaKindness Paradza, vebato reZanu PF, vanoti vanhu vatambura uye kutambura uku kuwadzera kana zvirango izvi zvikasabviswa.
VaParadza vanoti kunyange hazvo hurumende iri kutaura nenyika dzakaisa zvirango izvi pane hurongwa hwekuti nyika ifambire mberi kana zvirango zvikasabviswa.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari VaMasimba Manyanya vanoti ichokwadi kuti zvirango izvi zvakanganisa hupfumi zvekuti nyika ingadai yave pane chimwe chidano dai pasina zvirango izvi.
Asi vanotiwo hutongi husina kunaka ndihwo hwakaunza zvirango izvi uye kana zvikabviswa hupfumi haunaki kana paine hutongo hwakaipa.
VaManyanya vanoti hurumende haifaniri kungochema nenyaya yezvirango vachiti zvirango izvi zvaifanira kupa hurumende mukana wekutsvaga dzimwe nzira dzeraramo sezvakaitwa nehurumende yaVaIan Smith iyo yaitove nezvirango zvakaoma zveUnited Nations.
Sachigaro vesangano reZimbabwe National Editors Forum VaDumisani Muleya, vano bvumirana naVaManyanya vachiti kunyange zvirango zvikabviswa nyika haina kwainoenda nekuti vatungamiriri vari kutadza kutonga.
VaManyanya vanoti chinodiwa chete hutongi hwakajeka nekuchena. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa reMDC inotungamirirwa, naVaNelson Chamisa, Muzvare Gladys Hlatshwayo, vaudza Studio 7 kuti kunze kwezvirango zvekunze, Zanu PF inofanirawo kubvisa zvirango zvayakatemera vana veZimbabwe nekutadza kutungamira nyika.
Kunyange hazvo nyika dzemuSADC dziri kutsigira Zimbabwe panyaya yekuti zvirango zvibviswe vakawanda vanoti havawoni nyika idzi dzichibatsira kumutsiridza hupfumi wenyika.
Asi rimwe gweta rinombomirira VaMnangagwa, VaTinomudaishe Chinyoka vanove nhengo yeZanu-PF vanoti zvirrango zvauraya nyika.
Mukuru wesangano reRevolutionary Research Institute, VaTjenesani Ntungakwa, vanoti havaoni rubatsiro runobva kuSADC kunze kwekutaura chete.
VaMleya vanoti vatungamiriri veSADC vanofanira kugara pasi nemutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa, vovaudza gwara rekufambisa nyika kwete kuvarega vachipinda mudondo sezvavari kuita.
Asi VaParadza vanoti SADC iri kutotsigira Zimbabwe nekuti zvirango izvi zvave kubata batawo nyika idzi.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango neEuropean Union, America nedzimwe nyika dzemhiri kwemakungwa, makore makumi maviri apfuura, nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu, kuita sarudzo dzisina kuchena nezvimwe.